IsiNgisi Njengolimi Lwesibili (ESL) eHodges University
Categories: IsiNgisi Njengolimi Lwesibili, Okufakiwe
Thola indlela yakho eya empumelelweni ngohlelo lwethu lwe-ESL!
Lolu hlelo lwesitifiketi lwenzelwe ukuhlinzeka IsiNgisi njengolimi lwesibili (ESL) ukufundiswa ku ngcono ekhona yakho ulwazi, ukuqeqeshwa, Futhi amakhono emisebenzi lapho isiNgisi hhayi owomdabu wakho ulimi. Ngokwengeziwe, uhlelo lwesitifiketi lungaqhubekisela phambili ikhono lakho lokukwenza ukuxhumana ngesiNgisi futhi qhubeka nomsebenzi or college amathuba e-United States.
Uhlelo lolu lugxile ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni uhlelo lolimi, ukufunda, ukubhala, ukulalela kanye Okhulumayo amakhono, futhi ukuqonda. Ngokwengeziwe, ukufunda okusizwa ngekhompyutha kuqinisa izifundo zakho zesiNgisi namakhono esoftware.
Onke amakilasi e-ESL ayatholakala ngefomethi yethu eku-inthanethi ye-Technology Enhanced Classroom (TEC). Njengoba i-TEC inikwe amandla, manje sekuyenzeka ukuthi uthole isitifiketi sakho sesiNgisi ngokunethezeka kwekhaya lakho.
IsiNgisi Njengolimi Lwesibili (ESL) Imininingwane
UHodges unikeza inkambo ye-ESL ekhampasi yaseFort Myers kusuka ngo-8: 30 ekuseni - 1: 20 ntambama ngoMsombuluko kuze kube uLwesine.
Izifundo ezintathu zamaviki ayi-16 ngeleveli ngayinye
Igrama (Amazinga 1-3)
Ukufunda / Ukubhala (Amaleveli 1-3)
Ukulalela / Ukukhuluma (Amaleveli 1-3)
Izidingo Zokungena Kuzinhlelo ze-ESL:
Abafakizicelo kumele babe nediploma yesikole esiphakeme noma i-GED.
Abafakizicelo kumele babe nesimo esisemthethweni sokuhlala kanye / noma sokufunda e-United States esifundweni sethu somuntu siqu.
Abafakizicelo kumele okungenani babe neminyaka engu-18 ubudala.
Abafakizicelo kumele bagcwalise ifayili le- Ifomu Lokufaneleka Lokufaka Isicelo le-ESL, esetshenziselwa ukunquma ukufaneleka ukubhalisa kuhlelo.
I-Financial Aid iyatholakala kumaLevel 1-3 abafundi abafanelekile. Khuluma no Umxhumanisi we-Admissions ukuthola ukuthi ngabe uyakufanelekela yini ukuthola usizo lwezezimali.
* Sicela wazi, abafundi bamazwe aphesheya abane-visa ye-F-1 abaphishekela uhlelo lwe-ESL bazodinga ukuya emakilasini ekhampasi.
Imininingwane ye-College Prep English
Inkambo yesiNgisi yokulungiselela ikolishi engabanjwanga inikezwa ezingeni eliphakeme. Lezi zifundo zenzelwe ukuhlinzeka ngemfundo yolimi lwesiNgisi kubafundi abasezingeni eliphakeme lesiNgisi abalungiselela ikolishi noma abadinga ukwandisa ulwazi lwabo lwesiNgisi semfundo ngenhloso yobungcweti.
Isifundo Esibodwa Samakhono Ahlanganisiwe Samasonto Ayishumi nesithupha
Ukufunda, Ukubhala, nohlelo lolimi (Izinga 4)
Ungasithathaphi IsiNgisi Sokulungiselela I-English?
UHodges unikeza inkambo yaseKolishi yokulungiselela isiNgisi ekolishi laseFort Myers kusukela ngo-8: 30 ekuseni - 1: 00 ntambama ngoMsombuluko kuze kube uLwesine.
Ibhuloho LamaNgisi Elibanzi
I-Intensive English Program Bridge yenzelwe labo abadinga ukufundiswa ngolimi lwesiNgisi ukuze benze iziqu eHodges University. Lolu hlelo lunikeza abafundi ulimi lwabo lwendabuko olungesilo isiNgisi an inkambo ejulile leyo yakhelwe ukukulungiselela ukufunda, ukubhala, nokusebenzisa uhlelo lolimi nolwazimagama. Uhlelo lwethu lufundiswa ngothisha be-ESL abahlinzeka ngomkhuba obanzi wokuqonda nokusebenzisa izinto ezisezingeni lasekolishi.
Inkambo yamakhredithi ayi-12 inikezwa ezingeni eliphakeme lobungcweti besiNgisi, okunqunywa ekuthatheni i-HU Entrance Test. Inkambo yamasonto angu-16 inikezwa ezikhungweni zaseFort Myers naseNaples.
Ungasitholaphi IsiNgisi Esijulile?
Izidingo Zokungeniswa Ezijulile ze-English:
Abafakizicelo kumele babe nesimo esisemthethweni sokuhlala kanye / noma sokufunda e-United States.
Usizo lwezezimali luyatholakala kubafundi abafanelekayo.
Xhumana ne-Admissions ukuze uthole olunye ulwazi.
UJohnny Dorrine, Isisebenzi seBB & T kanye neziqu zeHodges ESL nezinhlelo Zokulawulwa Kwebhizinisi
"Ngenxa yeBritish Programme eningi eHodges, ngikwazile ukuqhubekela phambili ngezifundo ze-ESL, iBachelor's in Business Administration, ngaze ngaya nomsebenzi onomvuzo wokubhanga eBB & T."